ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Archives - Mingalarday
April 29, 2018 MinGaLar Day
အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အောက်ကအချက်တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါ (1) ပုံမှန်ငွေဝင်လမ်းတခုခုရှိနေပီလားးး???(စီးပွားရေး) စီးပွားရေးမရှိဘဲဘယ်အိမ်ထောင်မှတည်ဆောက်လို့မရဘူး စီးပွားရေးရှိတာတောင်စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ကြတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေထုနဲ့ဒေးရှိနေကြတာ ဘာဝင်ငွေဘာစီးပွားရေးမှမရှိဘဲနဲ့တော့အိမ်ထောင်ပြုဖို့မစဉ်းစားပါသေးနဲ့ဦးးး။ (2)ကိုယ်လက်တွဲမယ့်သူကိုအရာရာတိုင်းခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်ပီလားး??? ကိုယ်လက်တွဲမယ့်သူကခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာတော့ ရှိချင်မှရှိမယ်။ သူရဲ့အတိတ်ဆိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖြစ်လာမယ့်ပြသနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်... Read More
April 21, 2018 MinGaLar Day
ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဘက်က အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင် အသဲနာပြီး ဒေါသတွေထွက်၊ အပြစ်တွေအပြန်အလှန်တင် ရန်ဖြစ်၊အအ်ိပ်ပျက်အစားပျက်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရပါတယ်၊ အချို့ဆို ဘ၀ပျက်၊အနာဂတ်မဲ့တဲ့အထိ... Read More
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန် ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အပြုအမူ(၅)မျိုး
April 20, 2018 MinGaLar Day
အချစ်က အရာရာကို ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ချစ်စခင်စ ကြည်နူးစလောက်ပဲ ဘောင်ဝင်တာပါ ယောင်းတို့ ။ ရေရှည်အတွက် ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့... Read More
လိုတာထက် ပိုချစ်မိရင် တန်ဖိုးမဲ့လာတတ်တာကို ဆင်ခြင်ပါနော်
April 17, 2018 MinGaLar Day
အချစ်ဆိုတာကတော့ ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့အရာလို့ ဆိုရမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို လူတိုင်းက အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖွင့်ဆို... Read More
မိန်းကလေးတစ်ယောက် တကယ်စိတ်နာသွားရင် ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်….
April 16, 2018 MinGaLar Day
မိန်းကလေးတွေဟာ သည်းခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားလွန်းတဲ့အပြင် ချစ်သူကို အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က စိတ်နာတယ်လို့ဘယ်လောက်ပြောပြော ချစ်သူကို လက်မလွှတ်သေးဘူးဆိုရင် တကယ်စိတ်မကုန်သေးလို့ပါ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့... Read More
သက်တမ်းရင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့ ချစ်သူဘဝ ပိုချစ်၊ ပိုပျော်ရွှင်ရစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ခု
April 15, 2018 MinGaLar Day
အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ စချစ်ဖို့တော့လွယ်ပေမယ့် အကြာကြီးလက်တွဲမဖြုတ်တမ်း ဆက်ချစ်နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ချစ်သူစုံတွဲတော်တော်များများ အကြုံရဆုံးပြဿနာကတော့ တွဲတဲ့သက်တမ်းကြာလေ၊ အချစ်လျော့လေ ဖြစ်ခြင်းပါပဲ။... Read More
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး.
April 12, 2018 MinGaLar Day
ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ... Read More
မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခံရရင်တောင် တိုင်ရမှန်းမသိတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘ၀… အသက် ၁၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ။
မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခံရရင်တောင် တိုင်ရမှန်းမသိတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘ၀ (၁၂) နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင်တောင် အိမ်ထောင်ရှိယောက်ျားပေမဲ့ လက်ထပ်ယူဖို့အလွယ်ဖြေရှင်းရတဲ့သူတို့ဘ၀ နေဒါဏ်မိုးဒါဏ်ကြောင့် ပင်ကိုယ်ထက်ပိုပြီး... Read More
ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဒီလိုလေးတွေ ပြောင်းလဲလာမယ်
အပြုအမူဆိုတာ နှလုံးသားက လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် အရင်ကနဲ့မတူပဲ ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေ ရှိလာပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က... Read More